radio Satellite.com - खेलकुद
किन हार्‍यो नेपाल ?
Written by Super User on 19 June 2018. Posted in Sports
डेढ महिनाअघि नेपाली क्रिकेट टोलीले युएईमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्‍यो । नेपाल पहिलोपटक आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा छनोट भयो । नेपाली क्रिकेटप्रेमीले टी–२० को सफलतापछि छिट्टै एकदिवसीय विश्वकपमा समेत नेपाल छनोट हुने सपना साँचे । साथै चार वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता पाउने र चार दिवसीयको इन्टर कन्टिनेन्ट कप खेल्ने सपना पनि समर्थकले देखे । यही दुई उद्देश्यका साथ कप्तान पारस खड्का र प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेको टोली न्युजिल्यान्डको यात्रामा निस्कियो ।
प्रतियोगिताअघि नेपाललाई विश्वकप छनोट हुने दुई टोलीमध्येको दाबेदारका रूपमा हेरिएको थियो । तर, एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप छनोटमा नेपालले समूह ‘ए’मा चारै खेल गुमाउँदै आफ्नो दुवै सपना पूरा गर्न सकेन । विश्वकप खेल्ने सपना बोकेर न्युजिल्यान्ड पुगेको नेपालसमक्ष अब रेलिगेसनबाट बच्ने चुनौती छ । नेपालले सातौँ स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । चारपटक विश्वकप खेलिसकेको नेदरल्यान्डलाई नेपालले आफ्नो विपक्षी पाएको छ ।
सो खेलमा पराजित भए डिभिजन–३ मै झर्ने नेपालको सम्भावना छ । पछिल्ला दुई वर्षयता नेपाली टोलीले उत्कृष्ट नजिता निकाल्यो । तर, न्युजिल्यान्डमा नेपालको अहिलेसम्मकै कमजोर प्रदर्शन मानिएको छ । प्रतियोगितामा नेपाल बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङ पक्षमा कमजोर देखियो । प्रतियोगितामा नेपालको के कमजोरी भयो ? यस सम्बन्धमा नेपाली क्रिकेट अम्पायर विनय झाको विश्लेषण बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ ।
घाँसे पिचको तयारी भएन
न्युजिल्यान्डको पिच ‘घाँसे पिच’ हो । यहाँको पिचमा बल धेरै स्विङ हुन्छ । साथै तीव्रगतिका बलरका निमित्त उपयुक्त पिच मानिन्छ । न्युजिल्यान्ड भ्रमण गर्नुअघि हामीलाई त्यहाँको पिचबारे राम्रो जानकारी थियो । यसअघि नेपाली यू–१९ टोलीले न्युजिल्यान्डमै खेल्दा पनि त्यही समस्या थियो । तर, छनोट प्रतियोगिताका लागि हामीले ‘घाँसे पिच’मा तयारी गर्न सकेनौँ ।
जसकारण नेपाली टोलीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको हो । विश्वकप छनोटको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले श्रीलंकामा तयारी गर्‍यो । श्रीलंका छाडेर केही अघि न्युजिल्यान्ड नै गएको भए पनि हुन्थ्यो कि ? साथै छिमेकी भारतमा पनि घाँसे पिच छ । त्यहाँ गएर अभ्यास गरेको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । युएईमै पनि आइसिसी ग्लोबल एकेडेमीमा घाँसे पिच छ । हामी अस्ट्रेलिया नै जान सकेको भए पनि हुन्थ्यो, तर भएन । भारतीय टोली बलियो भए पनि न्युजिल्यान्ड वा अस्ट्रेलियाको पिचमा खेल्न सक्दैन । भारतको पनि समस्या भनेको फास्टपिचमा खेल्न नसक्नु हो । हामीले न्युजिल्यान्डको पिचअनुसार अभ्यास गर्न सकेनौँ । यसका साथै नेपालले यो पक्षमा ध्यान दिन सकेन ।
खेलाडी ‘अन फिट’
खेलाडी फिट नहुँदासम्म सोचेजस्तो नतिजा आउँदैन । यो निमय सबै खेलमा लागू हुन्छ । खेलाडीहरू शतप्रतिशत फिट हुनुपर्छ । जब अनफिट खेलाडी हुन्छन्, तब टोलीले सोचेजस्तो नतिजा निकाल्न सक्दैन । यसपटक नेपाली टोलीमा यही समस्या देखियो । खेलाडीहरू फिट देखिएनन् । कतिपय खेलाडीहरू बिरामी परे । उदाहरणका लागि कप्तान पारस खड्का आफैँ पनि घाइते भए । सुभाष खकुरेलले एउटै खेल खेल्न पाएनन् ।
अन्य केही खेलाडी पनि अनफिट देखिए । टोलीले पहिले नै तयारी गर्नुपथ्र्याे । त्यो सम्भव भएन । विश्वकप छनोटजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता खेल्न जाँदै छौँ । छनोट चरणमा हामीभन्दा बलियो टोली भएको ज्ञान भएकै कुरा हो । यस पक्षमा पनि नेपालले
ध्यान दिएन ।
कमजोर फास्ट बलिङ
छनोटमा कुनै पनि टोलीविरुद्ध नेपाली पेस बलिङ बलियो भएन । नेपाली टोलीबाट सोमपाल कामीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेले । उनको प्रदर्शन राम्रै छ । तर, अर्का पेस बलर जितेन्द्र मुखियाले सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । न्युजिल्यान्डको घाँसे मैदानमा पेस बलरको भूमिका निक्कै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्युजिल्यान्डको पिचमा स्विङ हुने हुनाले टोलीको मुख्य हतियार भनेको तीव्रगतिका बलर हुन् । नेपाली पेस बलरले त्यो नतिजा दिन सकेनन् । साथै, नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले विपक्षी सिमरविरुद्ध खुलेर खेल्न सकेनन् । चारै खेलमा नेपालले पावर प्लेमा विकेट पनि गुमायो र रनसमेत बनाउन सकेन । समूह चरणका चारै खेलमा नेपाली ब्याट्सम्यान सुरुवाती १० ओभरमा संघर्षरत देखिए । यसपटक नेपाली ब्याट्सम्यानले नयाँ बलमा खेल्न सकेनन् ।
पछिल्लो दुई वर्षमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एकपछि अर्को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्‍यो । यसको ह्यांग ओभर विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा समेत देखियो । अर्को अर्थमा भन्दा नेपाली खेलाडी न्युजिल्यान्डमा ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ वा आत्मविश्वास देखिए । युएईमा नेपाल टी–२० विश्वकपका लागि छनोट भएपछि खेलाडीले एकदिवसीय विश्वकप छनोट प्रतियोगितालाई समेत सहज रूपमा लिए ।
नेपाली खेलाडीलाई श्रीलंका भ्रमणले पनि त्यस्तो बनाएको हुनुपर्छ । किनभने त्यहाँ सबै खेल जिते । त्यसपछि उनीहरूले छनोट प्रतियोगितामा पनि यस्तै टोली हो र उनीहरूलाई सहज हराउन सक्छौँ भन्ने सोचेको हुनुपर्छ । तर, नेपालले प्रतियोगितामा सहभागी टोली बलिया छन् भन्ने कुरा बिर्सिए । छनोट प्रतियोगितामा सहभागी प्रत्येक टोली अनुभवी छ । कोही टोलीले एकदिवसीय विश्वकप खेलिसकेका छन् । कसैले चार दिवसीय इन्टर कन्टिनेन्ट कप खेलेका छन् । कुनै पनि टोली कमजोर थिएनन् । तर, नेपालले त्यसलाई सहज रूपमा लिएको देखियो । ५० ओभरको खेलका लागि जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।
प्रतियोगिताअघि नेपाली टोली तयारीका लागि श्रीलंका उडेको थियो । श्रीलंकामा हामीसँग खेल्ने टोली बलियो होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर, त्यस्तो हुन सकेन । नेपालले श्रीलंकाली स्थानीय टोलीलाई सहजै पाखा लगायो । श्रीलंकामा खेल जित्न नेपाली खेलाडीले बढी मिहिनेत गर्नुपरेन । श्रीलंकाको भ्रमणले नेपाललाई बढी आत्मविश्वासी बनायो ।
कमजोर बेन्च स्ट्रेङ्थ
नेपाली टोलीको बेन्च स्ट्रेङ्थ कमजोर भयो । नेपाली टोलीलाई यसको अभाव यही प्रतियोगितामा खड्कियो । कप्तान पारस र ओपनर सुवास बिरामी हँुदा उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने वा उनीहरूको स्थानमा पठाउन सकिने खेलाडी नै भेटिएनन् । बेन्च स्ट्रेङ्थको कुरा गर्दा घरेलु क्रिकेट स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्छ । हाम्रो घरेलु क्रिकेट स्ट्रक्चर निकै कमजोर छ । एक हप्ता वा दुई हप्ता एउटा प्रतियोगितामा खेलेर कसरी खेलाडी उत्पादन हुन्छ ? अन्य मुलुकमा हेर्दा त्यहाँका खेलाडी कुनै न कुनै प्रतियोगिता खेलेर आफूलाई व्यस्त बनाइरहन्छन् । साथै उनीहरूले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरिरहन्छन् । यसको विपरीत हाम्रोमा त्यस्तो छैन । पछिल्लो समय न कुनै खेलाडीले विदेशमा खेल्न पाएका छन्, न घरमै राम्रो क्रिकेट खेल्ने अवसर पाएका छन् । हामीले बेन्च स्ट्रेङ्थका लागि यू–१९ वा सिनियर प्रतियोगितामै हेर्ने हो भने पनि खेलाडी पाउँदैनन् ।
अब २०१९ को तयारी
कमजोरीको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि समाधान पनि खोज्नु आवश्यक छ । विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा हाम्रो तयारी कमजोरी नै भएको हो । त्यसैले अब २०१९ को विश्वकपका लागि तयारी सुरु गरिहाल्नुपर्छ । अनि मात्रै हामी विश्वकपका लागि बलियो बन्न सक्छौँ । तयारी अहिलेबाटै सुरु नगर्ने हो भने त्यसवेला पनि सपना देख्ने कुरा मात्रै हुन्छ, पूरा हुँदैन । त्यसका लागि नेपालले आफूभन्दा बलिया टोलीसँग एकदिवसीय मात्रै होइन, दुईदिवसीय वा तीनदिवसीय क्रिकेट खेल्नुपर्छ । खेलाडीलाई वर्षैभर क्रिकेटमा व्यस्त बनाइराख्नुपर्छ । अनि मात्रै टोली बलियो बन्छ
म्यानचेष्टर सिटी ईंगलिश प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा
म्यानचेष्टर सिटी ईंगलिश प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । गएराती टोट्टनह्यामलाई १ का विरुद्ध ५ गोलले हराउँदै सिटी ५३ अंकका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । सिटीको जितमा सर्जियो अगुएरो, याया टोरे, ईडिन जेको, स्टेभान जोभेटिक र भिन्सेन्ट कम्पनीले गोल गरे । यस्तै वेष्ट ह्यामसंग गोल रहित बराबरी गरी अंक बाँड्न बाध्य भएपछि चेल्सीले दोश्रो स्थानमा उक्लने अवसर गुमायो । प्रिमियर लिगकै अरु खेलमा सन्डरल्याण्डले स्टोक सिटीलाई १ शून्यले र एष्टन भिल्लाले वेष्ट ब्रोमलाई ३ का विरुद्ध चार गोलले हरायो ।
दृष्टिविहीन राष्ट्रिय खेलमा सहभागी बन्दै